Isampulu yeSithuthi sokuSebenza sokufunxa
I-YDC-3000 isampula ye-fumigating imoto eyona nto isebenzisa umgangatho ophezulu wensimbi engenasici, ithatha i-vacuum ephezulu ye-multilayer insulation.Ifanelekile kwisampula yokusebenza kunye nokuthutha esibhedlele, isampuli yebhanki kunye nebhubhoratri.
Thumela i-imeyile kuthi Khuphela
I-YDC-3000 isampulu yesithuthi esifunxayo sisixhobo esiphambili sisebenzisa umgangatho ophezulu wensimbi engenasici, yamkele i-vacuum multilayer insulation ephezulu, kwaye isiciko senziwe nge-aluminium alloy kunye ne-insulation foam. Iyaphatheka kwaye iyasebenza ekulawuleni izinga lokumka kwenitrogen engamanzi, kwaye iqinisekisa ukusebenza kunye nokuqina komsebenzi wokujika kwiqondo lobushushu eliphantsi. Eyona nto ifaneleke kakhulu kwisampulu yokusebenza kunye nothutho kwizibhedlele, iilayibrari zesampula kunye neelebhu.
○ uyilo lwepleyiti yekhava, ukuze ukusebenza kwexhala kunye nomzamo
○ Ixhotyiswe ngerekhoda yobushushu, ubushushu obubonakalayo
○ Umbhobho wokungenisa elulwelo wamkela iCGA295 isiqhagamshele, uqhaqho olufanelekileyo kunye nokudityaniswa
○ Isixhobo sokulawula isikrini sokuchukumisa, imveliso intle ngakumbi
○ Uyilo lweNoveli, kwisampulu yothutho ngaxeshanye, kodwa nokuqinisekisa ukhuseleko lwesampulu.
Izinto eziluncedo kwiMveliso:
● I-vacuum ephezulu yokugquma i-multilayer
Eyona nto iphambili yenziwe ngetsimbi ekumgangatho ophezulu kwaye ithatha i-vacuum ephezulu ye-multi-layer insulation.
● Ukusebenza okuzinzileyo
Xa isiciko sivaliwe, iqondo lokushisa phezulu kwibhokisi yefriji lingaphantsi kwe -180 ℃ kwiiyure ezingama-24. Ngezantsi -170 ℃ iiyure ezingama-36. Qinisekisa ukuba isampuli iyasebenza.
● Ukuzingisa emsebenzini
I-Cover plate eyenziwe nge-alloy ye-aluminium kunye ne-foam yokufakelwa, kulula ukuyisebenzisa kwaye inokulawula ngokufanelekileyo izinga lokunyuka kwe-nitrogen yolwelo.Ukuqinisekisa ukusebenza kunye nokuqina komsebenzi wesithuthi.
● Kukulungele ngakumbi ukuhamba
Ixhotyiswe ngeenqwelo zokubeka iinqwelo ezineziqhoboshi, indawo yokupaka kunye nokuhamba ngokulula kunye nokugcina abasebenzi.
Ngaphambili: Ulwelo lweNitrogen Bio efrijini
Okulandelayo: Samrt Cap
Ubungakanani bangaphandle (Obude x Ububanzi x Phezulu mm) 1465x570x985
Isithuba esingaphakathi kwebhokisi (Ubude x Ububanzi x Ubude mm) 1000x285x180
Sebenzisa isithuba kwiBhokisi (Ubude x Ububanzi x Ubude mm) 1000x110x180
Isithuba seShelf (Ubude x Ububanzi x Ubude mm) 1200x450x250
Inani 5 × 5 Iibhokisi zokukhenkceza 65
10 × 10 Iibhokisi zokuGcina eziMkhenkce 30
Iingxowa zegazi eziyi-50ml (enye) 105
200 ml Iibhokisi zeeBag zegazi 50
I-2 ml yeCryopreservation Tube 3000
Uluhlu lokugcina oluphathekayo lwetanki yenitrogen
Dry Shipper series ulwelo nitrogen itanki
Uthotho lwezothutho zokugcina ulwelo itanki yenitrogen
Uthotho lokugcina oluzinzileyo lwetanki yenitrogen engamanzi